MAQAL:Puntland oo soo dhaweysay go’aan ka soo baxay midowga Yurub(DHAGEYSO) – SBC
MAQAL:Puntland oo soo dhaweysay go’aan ka soo baxay midowga Yurub(DHAGEYSO)
Dawlad Goboleedka Puntland ayaa soo dhaweysay go’aan ka soo baxay Midowga Yurub oo ku aadanaa la dagaalanka kooxaha burcad badeeda Soomaalida ee ka wada hawlgalada afduubka xeebaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ee kulaala.
Wasiirka dekada Gaadiidka badda & la dagaalanka burcad badeeda Puntland Siciid Maxamed Raage ayaa shaaca ka qaaday in Puntland si diiran u soo dhaweynayso go’aanka ka soo baxay wasiirada arimaha dibada midowga Yurub oo la xiriira in burcad badeeda lagala dagaalamo dhanka beriga oo aan lagu ekaan badda oo kaliya taaso oo macnaheedu yahay in hawlgal ciidan wadamada midowga Yurub ee hawlaha la dagaalanka burcad badeeda ku jira ay ka fulin karaan meel kasta oo ka mid ah dhulka Soomaaliya.
Laakiin Siciid Maxamed Raage oo muujiyey in Puntland go’aankaasi soo dhawenayso hadana muxuu ka yiri in mowqifka Puntland ee la xiriira hawgalo laga fuliyey deegaanada Maamulka uu wasiirka ka yahay, arimahaasi iyo faahfaahin kale ku dhageyso shir jaraa’id oo uu qabtey wasiirku link-ga audio ka dhageyso.
HALKAN KA DHAGEYSO SHIRKAN JARAA’ID EE WASIIRKA
wale somalia waa u dhamaatay bad iyo biri waa laga soo galay,
ETHIOPIA, UGANDA, KENYA, BRUNDI, EUROPE, AMERICA, intaasuba way soo galeen oo wadamo gaalo ah, bal qoodhiin iyo xeradiin maxaa ku dhacay caalamul islam marka, sababta hal wadan oo muslim ahi ugu jiri waayay maxay tahay, somalia se maxaa u haray 4ta jaho hadii laga soo galay ????? bal su’aashaa halaga jawaabo
Waxaa haysta somalia , iyada ayaa isu kenntay. haddii wadaninimo jirto oo laysmaqli laha , oo damaca maslaxadeed shakhsiga layska deynlaha, cid wax ina ka qaadi lahayd ma jirteen- somaliya waxa la waayey qoys qura oo iswaafaqsan- iskadaaye midkaloo ka weyn
Bashir – Bashka
Why Djibouti is not a Muslim country…… Whats the matter with you…. People Somalia put it self in this situation, Somalis can get their self out of this..
Abdirahman Omar salat ( shardiile) says:
waxaa nasiib daro ah in aan cidkale edeyno, Somali isma rabto, Aduunkuna marabo adigu isma rabtid, European maahid, Arab Maahid, African Maahid, Asian Maahid, Indo China maahid and Persian maahid, sidaas darteed cidna kuma rabto allena kuma rabo sababtoo ah dulinkaad ku jirnaa dartiis.
yusuf ismail qodax says:
dhamanshacabka soomaaliyeed waan salaamayaa meelkasta ayjoogaan . shu aasha aan kaga qayb qaadanaayo waxa weyaan? waa maxay burcad badeed horta.
soomalida waxy tiraahdaa runta lagama xishoodo waayo soomaalia jabka haysta yaa ukeenay,yaana kasaari kara?
waxa kan kasocda dalkeena waa wax ay isu keentay iyadu oo laga simanyahy.
hadaliyo dhamaantii waxan leeyahay umada soomaliyeed ama ninkii lug kuleh howlaha burcad badeda in ka tanaasusho oo ay kasha qayso qaranimada iyo sumcadii luntay ee soomali . waa ogtihiin dalkeena waa kusoo jeeda dawladaha aduunka oo dhan oo kadhigtay fiidiyow ladaawao loona shaqa tago . maraka waxaan leeyahay aynu kashaqayno amaanka iyo soocilinta dalkeena inga oo is haysana gacmaha oo ayna cidka dabada inka wadin . ceebaheena iyo dalkeena waa lahaystaa waxaasna ingaa is keenay cidkale inooma keenin .soomaliyey madan bey inoo tahay inuu dalkeenu sidaa ahaado . soomaliyey aduun weynuhu tashayee maxaynu kutashanaa ??????………… by yousuf ismail qoadax
xuman arke says:
waxaa nasiib daro ah in wasiir dhan soo dhaweeyo in fara gelin lagu sameeyo dalkiisa waxaas wax dadka raali ka yihiin maaha waxaana loo baahnaa in uu kasoo horjeesto hadalkaa kasoo yeeray burcad badeeda badaha somalia ee usoo aadaa inay gurtaan khayraadka bada ee somalia
wasiirka wuxuu ilaaway in puntland ay leedahay ciidamo ku filan xaga biriga waxaana ka codsaneynaa inuu ka laabto hadalkaas aan xil kasnimada ku iman